I-Kickdynamic: Isiqulatho se-imeyile esenzelwe ubuqu esivulekileyo | Martech Zone
I-Kickdynamic: Isiqulatho se-imeyile esenzelwe ubuqu esivulekileyo
NgoLwesithathu, nge-14 kaJanuwari 2015 NgoLwesithathu, nge-14 kaJanuwari 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngelixa sisebenzela umboneleli ngenkonzo okhulayo we-imeyile, sisebenzise imimandla yomxholo onamandla kwimikhankaso ye-imeyile yabathengi bethu. Ungawutshintsha umxholo ngokusekelwe kwidatha obuyigcinele umrhumo. Inxalenye enzima yayikukuba idatha kufuneka ithanjisiwe kwaye ingeniswe kwinkqubo edinisayo. Imithetho yokuyila kwitemplate kwakungekho lula nayo. Ngexesha lokuthumela i-imeyile, umxholo wawusetiwe.
Sinomthengisi omnye wokuhamba owayenetemplate eyayinemithetho engamakhulu aliqela kweli phulo. Phantse wonke umntu obhalisileyo wayenayo i-imeyile eyi-100% eyenzelwe wena. Ireyithi yabo evulekileyo kunye neqondo lokuguqulwa linyuke kakhulu.
Xa uthumela i-imeyile ye-HTML, isicatshulwa siyathunyelwa kodwa imifanekiso icelwa kuphela xa umrhumeli ivula imeyile. Oko kubonisa ithuba elikhethekileyo lokulungisa umxholo we-imeyile ngokusekwe apho umbhalisi akuyo kunye nento abayenzayo endaweni yedatha enxulumene nengxelo yabo.
Kickdynamic yinkonzo ye-imeyile ekuvumela ukuba wakhe ii-imeyile ezinamandla, ezenzelwe umntu ezitshintsha umxholo ngexesha lokuvulwa kwe-imeyile! Nantsi imizekelo embalwa:
Indawo -Uza kuthini ukuba ndivula i-imeyile ekufutshane kakhulu nenye yeevenkile zakho kwingingqi? Ungabonisa umfanekiso wevenkile endikufutshane kuyo kunye neeyure kunye nendawo.
isixhobo -Ukuba ndikwisixhobo esiphathwayo, unokuba nomnqweno wokubonelela ngokusondeza umfanekiso ngokucace ngakumbi, okanye isibonelelo esikhethekileyo seselfowuni.
Isikhathi -Ukuba ndinokhuphiswano kunye nokubala, ixesha elishiyekileyo kukhuphiswano linokuboniswa ngexesha lokuvula.
yemozulu -Mhlawumbi kukho isaqhwithi esiqengqelekayo kwaye ufuna ukukhuthaza iimveliso ezithile ukuba kuyanetha.
Social -Mhlawumbi ndifuna ukwabelana ngeendaba zam zamva nje zentlalo!
Umakhi womgaqo weKickdynamic yimveliso enamandla ekuvumela ukuba usebenzise imigaqo evulekileyo yomamkeli esekwe kwimozulu, isixhobo, umhla / ixesha, indawo yokuziqhelanisa, nokulungiselela kunye nokuhlaziya imifanekiso ngexesha lokuvula. Ungasebenzisa umthetho wokwakha ukwenza imigaqo elula, okanye usebenzise izinto eziphambili ukuze ufumane ixesha elifanelekileyo lokuvula ixesha lokuthengisa.
Inqaku elinye lobuchwephesha koku kukuba xa i-imeyile ivuliwe kwaye umfanekiso uthunyelwe… utshixelwe kulo mfanekiso uthunyelwe. Abanye abaNikezeli beenkonzo ze-Intanethi kunye nezinye iiServer ze-imeyile (ezinje ngokuTshintshiselana) zigcina imifanekiso yendawo kwindawo yeseva. Ke ukuba uthathe isigqibo sokwenza uhlengahlengiso emva kokuba umbhalisi evule i-imeyile, baya kufumana umfanekiso ogciniweyo.
Senze iimvavanyo ngezo ntsuku zakuqala apho besithumela khona iiposti zethu zebhlog (isicatshulwa esibekwe kumfanekiso ongasemva) kodwa ekubeni i-URL yokucela umfanekiso ayitshintshanga kwi-imeyile iye kwi-imeyile, kwa loo mfanekiso ubukhe wavela. Kuba awunakutshintsha indawo yomfanekiso kubhabho kwindawo ye-imeyile ye-HTML, ngekhe ubuye umva uhlaziye umfanekiso.
Kusalungile ngenene Kickdynamic igxile kwezi ntlobo zomxholo okwenyani okwenyani we-imeyile. Kunye novavanyo kunye kubahlalutyi kwiqonga labo, kujongeka ngathi banesisombululo esomeleleyo kwii-imeyile ezizezakho.
tags: i-imeyile enamandlaumxholo we-imeyile onamandlaemailUkukhathalaumxholo we-imeyile owenzelwe wena
I-TrendSpottr: Guqula ingxolo yoLuntu ibe ziimpawu eziSebenzayo zakuqala
Supermetrics: Fumana yonke idatha yakho yeAnalytics kuGoogle amaXwebhu okanye kwi-Excel